ဧဇရ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / ဓမ်မဟောငျးကမျြး / ဧဇရ
1:1 ကုရု၏ပထမနှစျတှငျ, ရှရှင်ဘုရင်, သခင်ဘုရားသည်ကုရု၏ဝိညာဉ်ကိုငါနှိုးဆော်မည်, ရှရှင်ဘုရင်, ယေရမိ၏နှုတ်တော်ထွက်အနေဖြင့်သခင်ဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုမပြည့်စုံလိမ့်မည်ဟုနိုင်အောင်. ထိုမင်းသည်အသံတစ်သံထွက်ကိုစေလွှတ်, မိမိအတစ်ခုလုံးကိုနိုငျငံတျောသညျတလျှောက်လုံး, နှင့်လည်းစာအရေးအသားအတွက်, ဟုဆို:
1:2 "ထို့ကြောင့်ကုရုကပြောပါတယ်, ရှရှင်ဘုရင်၏: ဘုရားသခင်, ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်၏, ငါ့ထံသို့မြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှသောတိုင်းနိုင်ငံတို့ကိုအားပေးတော်မူပြီ, သူသည်ကိုယ်တော်တိုင်ငါယေရုရှလင်မြို့၌သူ့ကိုအဘို့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်သင့်သည်ဟုငါ့အားသွန်သင်ထားပါတယ်, ယုဒပြည်၌ရှိသောအရာဖြစ်ပါသည်.
1:3 အဘယ်သူသည်သင်တို့တွင်မိမိအတစ်ခုလုံးကိုလူဦးထံမှ? မိမိဘုရားသခင်သူ့ကိုနှင့်အတူရှိပါစေ. သူ့ကိုယေရုရှလင်မြို့သို့တက်ကြစို့, ယုဒပြည်၌ရှိသောအရာဖြစ်ပါသည်, သူ့ကိုထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ကြကုန်အံ့, ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်. ယေရုရှလင်မြို့၌သူသည်ဘုရားသခင့ဖြစ်ပါသည်.
1:4 ကျန်ကြွင်းသောသူအပေါင်းတို့သည်ပါစေ, သူတို့အသက်ရှင်မည်အကြောင်းနေရာတိုင်းမှာအပေါငျးတို့သသောနေရာများအတွက်, သူ့ကိုကူညီ, မိမိနေရာမှအနေဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီသည်လူ, ရွှေငွေနှင့်အတူ, နှင့်ကုန်စည်များနှင့်သိုးနွား, ထိုသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်ဆန္ဒအလျောက်ပူဇော်စေခြင်းငှါသမျှအပြင်, ယေရုရှလင်မြို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ "
1:5 ထိုအခါဘိုးဘေးများ၏ခေါင်းဆောင်များယုဒပြည်မှနှင့်ဗင်္ယာမိန်အနေဖြင့်, ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့်, လေဝိသားတို့သည်, အဘယ်သူ၏စိတ်ဝိညာဉ်သည်ဘုရားသခင်ကနှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်နှင့်သူအပေါငျးတို့, သည်ထ, ထိုသူတို့သည်သခင်ဘုရား၏ဗိမာနျတျောတညျဆောကျသို့တက်အံ့သောငှါဒါ, ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိ၏.
1:6 ပတ်လည်ရွှေငွေတန်ဆာနှင့်အတူမိမိတို့လက်ကိုကူညီသူနှင့်သူအပေါငျးတို့, ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ကျွဲနွားနှင့်အတူ, ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူ, သူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ခဲ့သမျှအပြင်.
1:7 အလားတူပဲ, ရှငျဘုရငျသကုရုသခင်ဘုရား၏ဗိမာန်တော်၏တန်ဆာကိုကမ်းလှမ်း, အရာဗုခဒ်နေဇာယေရုရှလင်မြို့မှခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်းနှင့်ဆိုင်သောဘုရား၏ဗိမာန်တော်၌နေရာချခဲ့သည်.
1:8 အခုတော့ကုရု, ပါရှားဘုရငျ, Mithredath တို့လက်ဖြင့်ထိုအကိုကမ်းလှမ်း, ဘဏ္ဍာရေးမှူး၏သား, သူရှေရှဗာဇာဤအထဲကရေတွက်ပြီး, ယုဒအမျိုးခေါင်းဆောင်.
1:9 နှင့်ဤသူတို့၏အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်: သုံးဆယ်ကိုရွှေဖလား, တထော, ငွေဖလား, နှစ်ဆယ်ကိုးစင်း, သုံးဆယ်ကိုရွှေခွက်,
1:10 ငွေအခွက်ကိုတစ်စက္ကန့်မျိုးကိုလေးရာတဆယ်, တထောအခြားသောတန်ဆာ.
1:11 ရွှေငွေတန်ဆာရှိသမျှကို၎င်းငါးထောင်လေးရာရှိသတည်း. ရှေရှဗာဇာဤသူအပေါင်းတို့ကိုဆောင်ခဲ့, ဗာဗုလုန် transmigration ကနေတက်ပြီသောသူတို့နှင့်အတူ, ဂျေရုဆလင်သို့.
2:1 အခုတော့အဲဒီပြည်နယ်၏သားဖြစ်ကြ၏, သူသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောကနေတက်ပြီ, အဘယ်သူကိုဗုခဒ်နေဇာ, ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်, ဗာဗုလုန်မြို့သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်, ယေရုရှလင်မြို့နှင့်ယုဒအမျိုးကိုမှပြန်လာသောသူ, မိမိမွို့မှအသီးအသီး.
2:2 သူတို့ကဇေရုဗဗေနှင့်အတူရောက်ရှိလာခဲ့, ယောရှု, Nehemiah, စရာယ, Reelaiah, မော်ဒကဲသည်, Bilshan, Mispar, ဗိဂဝဲ, ဟေုံ, ဗာနာ. ဣသရေလအမျိုး၏လူအရေအတွက်:
2:3 ပါရုတျအမြိုးသားတို့သ, နှစ်ထောင်တရာခုနစ်ဆယ်နှစ်ယောက်.
2:4 ရှေဖတိ၏သား, သုံးရာခုနစ်ဆယ်နှစ်ယောက်.
2:5 အာရာ၏သား, ခုနစ်ရာခုနစ်ဆယ်ငါးနှစ်ရှိသော်.
2:6 ပါဟတ်မောဘ၏သား, ယောရှုနှင့်ယွာဘ၏သား, နှစ်ထောင်ရှစ်ရာတဆယ်နှစ်လုံးကို.
2:7 ဧလံ၏သား, တထောင်နှစ်ရာငါးဆယ်လေးယောက်.
2:8 ဇတ္တု၏သား, ကိုးရာလေးဆယ်ငါးယောက်.
2:9 Zaccai ၏သား, ခုနစ်ရာခွောကျဆယျ.
2:10 ဗာနိ၏သား, ခြောက်ရာလေးဆယ်နှစ်.
2:11 ဗေဗဲသားကား, ခြောက်ရာနှစ်ဆယ်သုံး.
2:12 အာဇဂဒ်၏သား, တထောင်နှစ်ရာနှစ်ဆယ်နှစ်ယောက်.
2:13 အဒေါနိကံ၏သား, ခြောက်ရာခြောက်ဆယ်ခြောက်.
2:14 ဗိဂဝဲ၏သား, နှစ်ထောင်ငါးဆယ်ခြောက်ယောက်.
2:15 အာဒိ၏သား, လေးရာငါးဆယ်လေးယောက်.
2:16 အာတာ၏သား, ဟေဇကိမင်း၏အဘယ်သူသည်ခဲ့ကြသည်, ကိုးဆယ့်ရှစ်.
2:17 ဗေဇဲ၏သား, သုံးရာနှစ်ဆယ်သုံးယောက်.
2:18 Jorah ၏သား, တရာတဆယ်နှစ်လုံးကို.
2:19 ဟာရှုံ၏သား, နှစ်ရာနှစ်ဆယ်သုံးယောက်.
2:20 ဂိဗ္ဗာသားကား, ကိုးဆယ့်ငါး.
2:21 ဗက်လင်မြို့သားကား, တရာနှစ်ဆယ်သုံး.
2:22 နေတောဖမြို့သား, ငါးဆယ့်ခြောက်.
2:23 အာနသုတျမွို့သားတို့သညျ, တရာနှစ်ဆယ်ရှစ်.
2:24 စျယောကျ၏သား, လေးဆယ့်နှစ်.
2:25 Kiriatharim ၏သား, ခေဖိ, နှင့်ဗေရုတ်, ခုနစ်ရာလေးဆယ်သုံး.
2:26 ဂါဘမွို့သားတို့သ, ခြောက်ရာနှစ်ဆယ်-One.
2:27 မိတ်မတ်မြို့သားတို့သည်, တရာနှစ်ဆယ်နှစ်ယောက်.
2:28 ဗေသလမြို့နှင့်အာဣမြို့သားတို့သညျ, နှစ်ရာနှစ်ဆယ်သုံးယောက်.
2:29 ဒါမှမဟုတ်၏သား, ငါးဆယ့်နှစ်.
2:30 မာဂဗိတ်မြို့သား၏သား, တရာငါးဆယ်ခြောက်ယောက်.
2:31 အခြားသောဧလံမြို့သား၏သား, တထောင်နှစ်ရာငါးဆယ်ငါးယောက်.
2:32 ဟာရိမျ၏သား, သုံးရာနှစ်ဆယ်.
2:33 လောဒမွို့သားကား, Hadid, နှင့် Ono, ခုနစ်ရာနှစ်ဆယ်ငါး.
2:34 ယေရိခေါမြို့၏သား, သုံးရာလေးဆယ်ငါးယောက်.
2:35 Senaah ၏သား, သုံးထောင်ခြောက်ရာသုံးဆယ်.
2:36 ယဇ်ပုရောဟိတ်: ယောရှု၏အိမျတျောယဒေါယ၏သား, ကိုးရာခုနစ်ဆယ်သုံးယောက်.
2:37 အမြဲတမ်း၏သား, တထောငါးဆယ်နှစ်ယောက်.
2:38 ပါရှုရသားကား, တထောင်နှစ်ရာလေးဆယ်ခုနစ်.
2:39 ဟာရိမျ၏သား, တထောဆယ်ခုနစ်.
2:40 လေဝိသားတို့သည်: ယောရှုနှင့် Kadmiel ၏သား, Hodaviah ၏သား, ခုနစ်ဆယ်လေးယောက်.
2:41 အဆိုပါသီချင်းဆိုယောက်ျား: အာသပ်၏သား, တရာနှစ်ဆယ်ရှစ်.
2:42 တံခါးစောင့်၏သား: ရှလ္လုံ၏သား, အာတာ၏သား, Talmon ၏သား, တာလမုန်၏သား, Hatita ၏သား, Shobai ၏သား: စကားတခွန်းကိုတရာသုံးဆယ်ကိုး.
2:43 ဗိမာနျတျော၌ကျွန်ခံ: ဇိဟ၏သား, Hasupha ၏သား, Tabbaoth ၏သား,
2:44 Keros ၏သား, Siaha ၏သား, Padon ၏သား,
2:45 Lebnah သားခဲ့, Hagabah ၏သား, တာလမုန်၏သား,
2:46 အက်ကုပျ၏သား, Shamlai ၏သား, ဟာနန်၏သား,
2:47 Giddel ၏သား, Gahar ၏သား, ရှော၏သား,
2:48 ဇိန်၏သား, ကောဒအမြိုးသားတို့, Gazzam ၏သား,
2:49 ဩဇ၏သား, ပါသာ၏သား, Besai ၏သား,
2:50 Asnah ၏သား, နိမ်၏သား, Nephusim ၏သား,
2:51 Bakbuk ၏သား, Hakupha ၏သား, Harhur ၏သား,
2:52 Bazluth ၏သား, Mehida ၏သား, Harsha ၏သား,
2:53 Barkos ၏သား, သိသရ၏သား, Temah ၏သား,
2:54 ဟတိဖ၏သား, တည်း၏သား;
2:55 ရှောလမုန်၏အစေခံကျွန်၏သား, Sotai ၏သား, Sophereth ၏သား, ပီရူး၏သား,
2:56 Jaalah ၏သား, Darkon ၏သား, Giddel ၏သား,
2:57 ရှေဖတိ၏သား, Hattil ၏သား, Pochereth ၏သား, Hazzebaim ၏အဘယ်သူသည်ခဲ့ကြသည်, Ami ၏သား:
2:58 လူအပေါင်းတို့သည်ဗိမာန်တော်၌အစေခံကျွန်နှင့်ရှောလမုန်၏ကျွန်၏သား, သုံးရာကိုးဆယ်နှစ်ယောက်.
2:59 ထို Telmelah ကနေတက်ပြီသူခဲ့ကြသည်, Telhrsha, ခေရုဗိမ်, အမည်များ, နှင့်ပို. ထိုသူတို့ကသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးများ၏အိမ်သူအိမ်သားများနှင့်၎င်းတို့၏သားစဉ်မြေးဆက်ညွှန်ပြပေးနိုင်မ, သူတို့သည်ဣသရေလအမျိုးခဲ့ကြသည်ဟုတ်မဟုတ်:
2:60 ဒေလာ၏သား, တောဘိ၏သား, ကောဒအမြိုးသားတို့, ခြောက်ရာငါးဆယ်နှစ်ယောက်တည်း.
2:61 ထိုအခါယဇ်ပုရောဟိတ်၏သားထံမှ: Hobaiah ၏သား, ဂိဗော၏သား, ဗာဇိလဲ၏သား, အဘယ်သူသည်ဗာဇိလဲ၏သမီးနေတဲ့ဇနီးယူ, ဂိလဒ်, နှင့်သူတို့၏နာမဖြင့်သမုတ်သောသူ.
2:62 ဤသူတို့သည်အဆွေအမျိုးအလိုက်စာရင်း၏အရေးအသားရှာသောအခါ, သူတို့ကမတှေ့, ဒါသူတို့ယဇ်ပုရောဟိတ်ထဲကထုတ်ပစ်ခဲ့သည်.
2:63 ထိုအခါဖလားတော်ဝန်ကသူတို့ဌာန၏သန့်ရှင်းသောအနေဖြင့်မစားသင့်ကြောင်းကလညျး, ယဇ်ပုရောဟိတ်အဲဒီမှာပေါ်ထွန်းမည်ဟုသည်အထိ, လေ့လာသင်ယူပြီးပြည့်စုံ.
2:65 သူတို့ရဲ့အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအစေခံကျွန်တို့အပါအဝင်မဟုတ်, ခုနစ်ထောင်သုံးရာသုံးဆယ်ခုနစ်ယောက်ရှိတော်မူသောဒ. ထိုအကြားယောက်ျားနဲ့သီချင်းဆိုအမျိုးသမီးတွေသီဆိုခဲ့ကြသည်, နှစ်ရာ.
2:66 သူတို့မြင်းခုနစ်ရာသုံးဆယျခွောကျ; သူတို့ရဲ့လားနှစ်ရာလေးဆယ်ငါးယောက်ခဲ့ကြသည်;
2:67 သူတို့ရဲ့ကုလားအုပ်လေးရာသုံးဆယ်ငါးယောက်ခဲ့ကြသည်; သူတို့ရဲ့မြည်းခြောက်ထောင်ခုနစ်ရာနှစ်ဆယ်ခဲ့ကြသည်.
2:68 ဘိုးဘေးတို့တွင်ခေါင်းဆောင်များနှင့်အချို့သော, ထိုသူတို့သည်သခင်ဘုရား၏ဗိမာနျတျောသို့ဝငျသညျ့အခါ, ယေရုရှလင်မြို့၌အရာဖြစ်ပါသည်, လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ဤအချို့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်, ယင်း၏တည်နေရာအတွက်တည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက်.
2:69 သူတို့ကသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်နှင့်အညီအလုပျ၏ကုန်ကျစရိတ်အားပေးသော: ခြောက်သောင်းတထောင်ကိုရွှေဒင်္ဂါးပြား, ငါးထောင်, ငွေ Mina, တရာယဇ်ပုရောဟိတ်အဝတ်.
2:70 ထို့ကြောင့်, ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့်လေဝိသား, လူများနှင့်အချို့, နှင့်သီချင်းဆိုယောက်ျား, နှင့်တံခါးစောင့်, နှင့်ဗိမာနျတျော၌ကျွန်ခံသူတို့မြို့များတှငျနထေိုငျ, အမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သူတို့မြို့များတှငျနထေိုငျ.
3:1 ယခုမှာသတ္တမလရောက်ရှိလာခဲ့ဖူး, အမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုး၏သားသူတို့မြို့များရှိကြ၏. ထိုအခါ, လူအ စုဝေး., တယောက်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်, ယေရုရှလင်မြို့၌.
3:2 နှင့်ယောရှု, ဇဒက်၏သား, သူ့အစ်ကိုတွေနဲ့အတူထလျက်, ယဇ်ပုရောဟိတ်. ဇေရုဗဗေ, Shealtiel ၏သား, သူ့အစ်ကိုတွေနဲ့အတူထလျက်. ထိုသူတို့က, ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်၏ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်, သူတို့ကအပျေါမှာမီးရှို့ပူဇော်စေခြင်းငှါဒါ, မောရှေ၏ပညတ္တိကျမ်း၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ခဲ့သည်နည်းတူ, ဘုရားသခငျ၏လူ.
3:3 အခုတော့သူတို့ကခြေစွပ်အပေါ်သို့ဘုရားသခင်၏ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည် ထား., ဝေးကနေအပေါငျးတို့သညျပတျဝနျးကငျြနိုငျငံကိုလူစောင့်ရှောက်ခြင်းအနေဖြင့်. ထိုသူတို့ကပလ္လင်ပေါ်မှာထာဝရဘုရားအားမီးရှို့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်, နံနက်နှင့်ညနေပိုင်း.
3:4 ထိုသူတို့ကတဲ၏ပွဲခံထားရှိမည်, ဒါကြောင့်ရေးသားခဲ့သကဲ့သို့, နှင့်နိုင်ရန်အတွက်နေ့ရက်တိုင်း၏မီးရှို့, အဆိုပါပညတ်သည်နှင့်အညီ, ၎င်း၏ကာလ၌နေ့ရက်တိုင်း၏လုပျငနျး.
3:5 ထိုအပြီး, သူတို့ကအစဉ်အမြဲမီးရှို့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်, သန့်ရှင်းစေသောသခင်ဘုရား၌ရှိသမျှသောအဘို့ဓမ္မအပေါ်အဖြစ်လဆန်းအပေါ်အများကြီးအဖြစ်, နှင့်သူအပေါငျးတို့အပေါ်တစ်ဦးမိမိဆန္ဒအလျောက်ဆုကြေးဇူးကိုထာဝရဘုရားအားပူဇော်ရသောအခါ.
3:6 သတ္တမလပဌမ နေ့မှစ., ထိုသူတို့သည်သခင်ဘုရားမှမီးရှို့ပူဇော်ဖို့စတင်. သို့သော်ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်သေးတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမခံခဲ့ရ.
3:7 ဒါကြောင့်သူတို့ကဖြတ်သောသူတို့အားပိုက်ဆံ ပေး. ကျောက်ခဲတို့ကိုထားကြ၏. အလားတူပင်, သူတို့အစားအစာကိုပေး၏, သောက်, ရေနံနှင့်ဇိဒုန်နှင့် Tyrians မှ, သူတို့အာရဇ်သစ်သားဆောင်ကြဉ်းမယ်လို့ဒါ, လေဗနုန်တောထဲကနေယုပ္ပေမှာပင်လယ်, ကုရုသဖြင့်ထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုမှာထားတော်မူခဲ့ရာနှငျ့အညီ, ရှရှင်ဘုရင်၏.
3:8 ထိုအခါ, ယေရုရှလင်မြို့၌ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်မှမိမိတို့၏ထွန်း၏ဒုတိယနှစျတှငျ, ဒုတိယလတွင်, ဇေရုဗဗေ, Shealtiel ၏သား, နှင့်ယောရှု, ဇဒက်၏သား, သူတို့ညီအစ်ကိုများနှင့်ကျန်ရှိသော, ယဇ်ပုရောဟိတ်, လေဝိသားတို့သည်, ယေရုရှလင်မြို့သို့သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအနေဖြင့်ရောက်ရှိလာခဲ့ဖူးသူအပေါင်းတို့သည်, စတင်ခဲ့သည်, သူတို့လေဝိသားတို့ကိုခန့်အပ်ထားသော, နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကနေကျော်, သခင်ဘုရား၏အမှုတော်ကိုအလျင်အမြန်ရန်.
3:9 ယောရှုနှင့်သူနှင့်သူ၏သားညီအစျကိုမြားနှငျ့, Kadmiel နှင့်သူ၏သားတို့သည်, ယုဒအမျိုးနှင့်သားတို့သ, တယောက်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်, ထိုသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်၌အလုပျခဲ့တယျသူမြားကိုကျော်တာဝန်ခံရှိစေခြင်းငှါ, ဒါကြောင့်မတ်တပ်ရပ်: Henadad ၏သား, နှင့်သူတို့သား, နှင့်သူတို့၏ကညီအစ်ကိုတွေ, လေဝိသားတို့သည်.
3:10 ထိုအခါလက်သမားသခင်ဘုရား၏ဗိမာန်တော်မှစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးပြီးမှ, ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်တံပိုးနှင့်အတူသူတို့၏ဂုဏ်၌ရပ်လျက်, လေဝိသားတို့သည်, အာသပ်၏သား, လင်းကွင်းနှင့်အတူမတ်တပ်ရပ်, သူတို့ဒါဝိဒ်၏လက်ဖြင့်ဘုရားသခင့ချီးမွမ်းကြအံ့သောငှါဒါ, ဣသရေလရှင်ဘုရင်သည်.
3:11 ထိုသူတို့က, ထာဝရဘုရားအားဓမ္မသီချင်းနှင့်ဝန်ခံအတူသီဆို: "ကောင်းမြတ်တော်မူသည်. ကရုဏာတော်အထိုနည်းတူ။ ထာထံသို့ဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုးဖြစ်ပါတယ် "ထိုအခါ, လူများအပေါင်းတို့သည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ခြီးမှမျးခွငျး၌ကြီးစွာသောဆူညံနှင့်အတူအော်, သခင်ဘုရား၏ဗိမာန်တော်မှစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သောကြောင့်,.
3:12 ထိုအခါယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့်လေဝိသားအများအပြား, နှင့်ဘိုးဘေးတို့နှင့်အသက်ကြီးသူတို့၏ခေါင်းဆောင်များက, ယခင်ဗိမာနျတျောကိုမွငျခဲ့သူ, ယခုဤဗိမာန်တော်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးသူတို့မျက်မှောက်၌ခဲ့သည့်အခါ, အလွန်ကြီးစွာသောအသံနှင့်ငိုကြွေးကြ၏. ထိုအခါသူတို့ကိုများစွာကို, ဝမ်းမြောက်သောစိတ်အဘို့အော်ဟစ်ခြင်း, သူတို့ရဲ့အသံကို.
3:13 မည်သူမဆိုဝမ်းမြောက်ခြင်းဆူညံ၏စကားသံအကြားခွဲခြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းမ, နှင့်လူမျိုး၏ငိုကြွေးသံ်ခြင်းစကားသံကို. အလွန်ကြီးစွာသောဆူညံသို့ရောလူမျိုး၏ကြွေးကြော်သံများအတွက်, နှင့်စကားသံကိုဝေးသောအရပ်မှအသံကိုကြားရ၏.
4:1 အခုတော့ယုဒအမျိုးနှင့်ဗင်္ယာမိန်၏ရန်သူများကိုသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသော၏သားတို့သည်ထာဝရဘုရားအားဝတ်ပြုရာအိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းခဲ့သညျကွား, ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်.
4:2 ဆိုတော့, အနီးဇေရုဗဗေနှင့်ဘိုးဘေးများ၏ခေါင်းဆောင်များမှ drawing, သူတို့ကလညျး: "ကျွန်တော်တို့ကိုသင်တို့နှင့်အတူတည်ဆောက်ကြစို့, အကြှနျုပျတို့သညျပွုပါသကဲ့သို့သင်တို့၏ဘုရားသခင်ရှာသည်. အကယ်, ကျနော်တို့ Esarhaddon ၏လက်ထက် မှစ. အထံတော်သို့ဒုက္ခသည်များကို immolated ပါပြီ, အာရှုရိရှင်ဘုရင်, သူကိုကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်ခဲ့လေ၏။ "
4:3 ဇေရုဗဗေ, နှင့်ယောရှု, ဣသရေလအမျိုး၏ဘိုးဘေးများ၏ခေါင်းဆောင်များ၏ကျန်ကလညျး: သငျသညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူငါတို့ဘုရားသခငျ၏အိမျတျောကိုတညျဆောကျဖို့အတှကျ "ဒါဟာမဖြစ်. အဲဒီအစား, ကျွန်တော်တစ်ဦးတည်းထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျတည်ကြလိမ့်မည်, ရုံကုရုအဖြစ်, ရှရှင်ဘုရင်၏, ကျွန်တော်တို့ကိုမှာထားတော်မူခဲ့သည်။ "
4:4 ထို့ကြောင့်, ထိုသို့ပြည်သားယုဒလူတို့လက်နှောင့်နှေးစေသည်ဖြစ်ပျက်, သူတို့အဆောက်အဦး၌သူတို့ကိုနှောငျ့ရှကျ.
4:5 ထိုအခါသူတို့ကသူတို့တဘက်၌တိုင်ပင်မှူးမတ်ငှားရမ်းထား, သူတို့ကုရုလက်ထက်ကာလပတ်လုံးကာလအတွင်း၎င်းတို့၏အစီအစဉ်ကိုဆန့်ကျင်ငြင်းခုန်စေခြင်းငှါဒါ, ပါရှားဘုရငျ, ပင်ဒါရိမင်းကြီးနန်းစံသည်အထိ, ရှရှင်ဘုရင်.
4:6 ဆိုတော့, အာရွှေရု၏နန်းစံစဉ်ကာလအတွင်း, နန်းစံရဲ့အစမှာ, သူတို့သည်ယုဒနှင့်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့၌အပြစ်တင်ခွင့်ကိုရေးသားခဲ့သည်.
4:7 ဆိုတော့, အာတဇေရဇ်လက်ထက်၌, Bishlam, Mithredath, နှင့် Tabeel, နှင့်၎င်းတို့၏ကောင်စီ၌ရှိသူကိုအခြားသူများအာတဇေရဇ်ထံသို့ရေးသားခဲ့သည်, ရှရှင်ဘုရင်. အခုတော့စွပ်စွဲချက်များ၏အက္ခရာ Syriac တွင်ရေးသားခဲ့, နှင့်ဆီးရီးယားဘာသာစကားတွင်ဘတ်ရွတ်ခဲ့သည်.
4:8 ဟေုံ, တပ်မှူး, နှင့် Shimshai, စာရေး, ယေရုရှလင်မြို့မှမင်းကြီးသည်အာတဇေရဇ်တစ်ခုစာတစ်စောင်ရေးသားခဲ့သည်, ဒီနည်းလမ်းအတွက်:
4:9 "ဟေုံ, တပ်မှူး, နှင့် Shimshai, စာရေး, နှင့်သူတို့၏တိုင်ပင်မှူးမတ်၏ကျန်, တရားသူကြီး, မင်း, အဆိုပါအရာရှိများ, ပါရှားကနေသူများ, Erech ထံမှ, ဗာဗုလုန်ကနေ, ရှုရှန်ကနေ, အဆိုပါ Dehavites, နှင့် Elamite,
4:10 နှင့်တပါးအမျိုးသားတို့၏ကျန်, ကြီးဘုန်းကြီးသော Osnappar လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ရှမာရိမြို့ရွာနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်မြစ်ကိုဖြတ်ပြီးဒေသ၏ကျန်မှာနေထိုင်စေတော်မူသော:
4:11 ရှငျဘုရငျသအာတဇေရဇ်ထံသို့. (ဤသည်မှာစာကိုတစ်ဦးမိတ္တူဖြစ်ပါသည်, သောသူတို့သည်အထံတော်သို့စေလွှတ်ခဲ့သည်။) ကိုယ်တော်၏ကျွန်တို့သည်, မြစ်ကိုဖြတ်ပြီးနေသောလူတို့သညျ, တစ်ဦးမေတ္တာနှင့်ကြားလိုက်ပါ၏ပေးပို့.
4:12 ကရှင်ဘုရင်အားထင်ရှားစေကြလော့, ယုဒလူတို့ကြောင်း, သူကိုအကြှနျုပျတို့အားသင့်ထံမှတက်ပြီ, ယေရုရှလင်မြို့၌ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ, ပုန်ကန်တတ်သောအများစုမတရားသောသူသည်မြို့, သူတို့တည်ဆောက်နေသည့်, ယင်း၏ရိုးဆောက်လုပ်နှင့်မြို့ရိုးကိုပြုပြင်.
4:13 ယခုမှာရှင်ဘုရင်သိပါစေ, လျှင်ဤမြို့ကိုတက် built ခဲ့ကြလိမ့်မည်ဟု, နှင့်၎င်း၏ရိုးကိုပြုပြင်ကြ, သူတို့အခွန်ဆက်ပေးဆောင်မည်မဟုတ်, မဟုတ်အခွန်, မဟုတ်နှစ်စဉ်ဝင်ငွေ, နှင့်ဤဆုံးရှုံးမှုပင်ရှငျဘုရငျတို့အကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်.
4:14 ဒါပေမယ့်, ကျနော်တို့နန်းတော်၌စားသောဆားကိုအောကျမေ့, ငါတို့သည်ရှင်ဘုရင်ကိုကြည့်ဖို့တစ်ရာဇဝတ်မှုထိခိုက်ကြောင်းယုံကြည်ဖို့ဦးဆောင်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်, ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ရှင်ဘုရင်အားစေလွှတ်သတင်းပို့ကြပါပြီ,
4:15 သင်သည်သင်၏ဘိုးဘေးများ၏သမိုင်း၏စာအုပ်များအတွက်ရှာဖွေစေခြင်းငှါဒါ, သင်မှတ်တမ်းများ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ရှာတွေ့နိုင်ပါစေ, သငျတို့သညျဤမြို့သည်ပုန်ကန်သောမြို့ဖြစ်၏သိစေခြင်းငှါ, ထိုသို့ရှင်ဘုရင်တို့နှင့်ပြည်နယ်များမှအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း, နှင့်စစ်ပွဲများရှေးလကျထကျကနေအတွင်းလှုံ့ဆော်ခဲ့. ထို့အပြင်ရာအကြောင်းပြချက်များအတွက်, မြို့သူမြို့သားကိုယ်တိုင်ကဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်.
4:16 ကျနော်တို့လျှင်ဤမြို့ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြပြီလိမ့်မည်ဟုရှင်ဘုရင်အားသတင်းပို့, နှင့်၎င်း၏ရိုးကိုပြုပြင်ကြ, သငျသညျမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးအဘယ်သူမျှမအပိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ "
4:17 ရှငျဘုရငျဟေုံမှစကားလုံးတို့ကိုစေလွှတ်, တပ်မှူး, နှင့် Shimshai မှ, စာရေး, နှင့်၎င်းတို့၏ကောင်စီ၌နေသောအရာကြွင်းလေမှ, ရှမာရိမြို့သားတို့, နှင့်အခြားသူများအားမြစ်ကိုဖြတ်ပြီး, တစ်ဦးနှုတ်ဆက်ခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်း.
4:18 "ဒီစှပျစှဲခကျြ, ရာသငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုစေလွှတ်ပြီ, ငါ့ရှေ့မှာအကျယ်လောင်စွာဖတ်ပါခဲ့ပြီး.
4:19 ထိုသို့ငါ့အားဖြင့်မှာထားတော်မူခဲ့သည်, သူတို့ရှာဖွေဤမြို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့, ရှေး၏လက်ထက် မှစ., ရှငျဘုရငျတို့ပုန်ကန်ပြီ, နှင့်ပုနျကနျနှင့်တိုက်ပွဲများကြောင့်အတွင်းလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြကြောင်း.
4:20 ထိုအခါလွန်း, ယေရုရှလင်မြို့၌အလွန်အားကောင်းတဲ့ရှငျဘုရငျတို့ရှိပါပြီ, ထို့အပြင်မြစ်ကိုဖြတ်ပြီးဖြစ်သောတစ်ခုလုံးကိုဒေသအုပ်စိုးသူကို. သူတို့ကအစအခွန်ဆက်ယူကြပြီ, နှင့်အခွန်, နှင့်ဝင်ငွေ.
4:21 သို့ဖြစ်., ဝါကျကိုနားထောငျ: သူတို့အားယောက်ျားတားမြစ်, ဤမြို့ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်မဟုတ်စေခြင်းငှါဒါ, ဖြစ်ကောင်းသည်အထိငါ့ထံမှထပ်မံအမိန့်ရှိစေခြင်းငှါ.
4:22 သင်ဤဖြည့်ဆည်းအတွက်ပေါ့ပေါ့ဆဆမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအဲဒါကိုကြည့်ရှုပါ, မဟုတ်ရင်, နည်းနည်းချင်းစီ, မကောင်းသောအရှငျဘုရငျတို့ဆန့်ကျင်တိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ "
4:23 ဒီတော့မင်းကြီးသည်အာတဇေရဇ်၏အမိန့်ပြန်တမ်းမိတ္တူဟေုံရှေ့မှာဘတ်ခဲ့သည်, တပ်မှူး, နှင့် Shimshai, စာရေး, နှင့်သူတို့၏တိုင်ပင်မှူးမတ်. ထိုသူတို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့ပျာကသီသို့သှားကွ၏, ယုဒလူတို့အား. ထိုသူတို့ကအင်အားနှင့်အစွမ်းသတ္တိအားဖြင့်သူတို့ကိုတားမြစ်သည်.
4:24 ထိုအခါယေရုရှလင်မြို့၌ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်အမှုကိုဆောင်ရွက်ပြတ်တောက်ခဲ့သည်, ထိုသို့ဒါရိမင်းကြီးနန်းစံ၏ဒုတိယနှစ်တိုင်အောင်ပြန်လည်စတင်မပြုခဲ့, ရှရှင်ဘုရင်၏.
5:1 အခုတော့ဟဂ်ဂဲ, ပရောဖကျ, ဇာခရိ, ဣဒေါသား, ယုဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့၌နေသောယုဒလူတို့သည်ရန်, ပရောဖက်ပြု, ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်၏နာမ၌ပရောဖက်ပြု.
5:2 ထိုအခါဇေရုဗဗေ, Shealtiel ၏သား, နှင့်ယောရှု, ဇဒက်၏သား, ထယေရုရှလင်မြို့၌ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ရန်စတင်. တဖန်ဘုရားသခင်၏ပရောဖက်သူတို့နှင့်အတူရှိကြ၏, သူတို့ကိုကူညီ.
5:3 ထိုအခါ, တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, Tattenai, မြစ်အနောက်ဘက်မြို့ဝန်မင်းသူကိုခဲ့သည်, နှင့် Shetharbozenai, နှင့်သူတို့၏တိုင်ပင်မှူးမတ်သူတို့ကိုဆီသို့ရောက် လာ. ,. ထိုသူတို့ကသူတို့ကိုရန်ဤလမ်းအတွက်ပြောသော: "အဘယ်သူသည်သင်တို့ကိုအကွံဉာဏျပေးတော်မူပြီ, သငျသညျဤအိမျကိုတညျဆောကျနှင့်၎င်း၏ရိုးကိုပြုပြင်မယ်လို့ဒါ?"
5:5 သို့သော်သူတို့၏ဘုရားသခင်၏မျက်စိယုဒလူတို့ကိုအကွီးအကဲမြားကျော်သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်, ဒါသူတို့ကသူတို့ကိုဆီးတားနိုင်ခဲ့ပါ. ထိုသို့ဒီကိစ္စကိုဒါရိမင်းကြီးရည်ညွှန်းသင့်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ကြသည်, ပြီးတော့သူတို့ကထိုသို့စွပ်စွဲဆန့်ကျင်နေတဲ့အကြောင်းပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်.
5:6 ထိုစာကြောင့် Tattenai ၏တစ်ဦးမိတ္တူ, မြစ်တဘက်ယင်းဒေသ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူး, နှင့် Shetharbozenai, နှင့်သူ၏တိုင်ပင်မှူးမတ်, မြစ်တဘက်၌အဘယ်သူသောမင်းတို့, ဒါရိရှင်ဘုရင်စေလွှတ်သ.
5:7 သူတို့ကသူ့ကိုစေလွှတ်သောစကားလုံးဤနည်း၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ခဲ့သည်: "ဒါရိမင်းကြီးရန်, အားလုံးငြိမ်းချမ်းရေးရှင်ဘုရင်၏.
5:8 ကရှင်ဘုရင်အားထင်ရှားစေကြလော့, ကျနော်တို့ယုဒခရိုင်မှသှားသော, ကြီးစွာသောဘုရားသခင်၏အိမ်တော်မှ, သူတို့ကြမ်းတမ်းကျောက်ခဲနှင့်တည်ဆောက်နေရာ, နှင့်ကျွန်းသစ်နှင့်အတူမြို့ရိုးသို့သတ်မှတ်ထား. နှင့်ဤလုပ်ငန်းကိုစေ့စေ့ဆောကျခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်, ထိုသို့မိမိတို့၏လက်ဖြင့်တိုးပွါး.
5:9 ထို့ကြောင့်, အဲဒီအကွီးအကဲမြားကိုမေးခွန်းထုတ်, ကျနော်တို့ကဒီလမ်းအတွက်ပွောဆိုကွလြှငျ: '' အဘယ်သူသည်သင်တို့ဆီသို့အခွင့်အာဏာပေးတော်မူပြီ, သငျသညျဤအိမျကိုတညျဆောကျနှငျ့ဤမြို့ရိုးကိုပြုပြင်မယ်လို့ဒါ?''
5:10 သို့သော်ငါတို့သည်လည်းသူတို့အမည်များကိုမလိုအပ်, ငါတို့သည်သင်တို့မှသတင်းပို့စေခြင်းငှါဒါ. ငါတို့သည်မိမိတို့၏ယောက်ျားများ၏အမည်များကိုချရေးထားပြီ, သူတို့တွင်ခေါင်းဆောင်များနေသောသူတို့ကို.
5:11 ထိုအခါသူတို့ကဒီထုံးစံကိုစကားလုံးတစ်လုံးတုံ့ပြန်, ဟုဆို: '' ကျနော်တို့ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို၏ဘုရားသခငျ၏ကြှနျများမှာ. ငါတို့သည်ထိုအနှစ်ပေါင်းများစွာမပြုမီဆောက်လုပ်ထားသောဗိမာနျတျောတညျဆောနေကြတယ်, နှင့်သောဣသရေလအမျိုး၏မဟာအရှင်မင်းကြီးတည်တည်ဆောက်ခဲ့.
5:12 သို့သော်ထိုနောက်မှ, ငါတို့ဘိုးဘေးများအမျက်တော်မှကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်၏တော်ကိုနှိုးဆော်ခဲ့သည်, ဒါကြောင့်သူကဗုခဒ်နေဇာလက်သို့အပ်တော်မူ၏, ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်, ခါလဒဲ. ထိုမင်းသည်ဤအိမျတျောကိုဖကျြဆီး, သူသည်ဗာဗုလုန်ရန်၎င်း၏လူတွေကိုပြောင်းရွှေ့.
5:13 ထိုအခါ, ကုရု၏ပထမနှစျတှငျ, ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်, ရှငျဘုရငျသကုရုအမိနျ့ထုတ်ပေး, ဒါကြောင့်ဘုရားသခငျ၏ဤအိမျကိုတညျဆောကျခံရမယ်လို့.
5:14 ယခုမှာဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်ထဲကရွှေနှင့်ငွေအတန်ဆာ, အရာဗုခဒ်နေဇာသည်ယေရုရှလင်၌ပါသောဗိမာန်တော်ထဲကယူခဲ့သော, နှင့်ပေးသောသူသည်ဗာဗုလုန်ဗိမာနျတျောမှသိမ်းခဲ့သော, ရှငျဘုရငျသကုရုဗာဗုလုန်ဗိမာန်တော်ထဲကယူဆောင်, သူတို့ရှေရှဗာဇာကိုခေါ်တပေးခဲ့, သူလည်းဘုရင်ခံအဖြစ်ခန့်အပ်တော်မူသော.
5:15 သူသညျအထံတော်ကပြောပါတယ်: "ဒီရေယာဉ်များကိုယူ, သွား, ယေရုရှလင်မြို့၌သောဗိမာနျတျော၌သူတို့သတ်မှတ်ထား. နှင့်၎င်း၏အရပ်ဌာန၌တညျဆောကျခံရသညျဘုရားသခငျ၏အိမျတျောပါစေ။ "
5:16 ဒီတော့ဒီတူညီတဲ့ရှေရှဗာဇာထို့နောက်သညျ လာ. ယေရုရှလင်မြို့၌ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်၏အမြစ်ကိုသတ်မှတ်. ထိုကာလကနေ, ယခုတိုင်အောင်, က built နေပါသည်, ထိုသို့သေးပြီးစီးခဲ့သည်မဟုတ်။ ''
5:17 သို့ဖြစ်., ကရှင်ဘုရင်အားကောင်းသောပုံရသည်ဆိုပါက, သူ့ကိုဘုရင့်စာကြည့်တိုက်အတွက်ရှာဖွေကြကုန်အံ့, ဗာဗုလုန်မြို့၌အရာဖြစ်ပါသည်, မင်းကြီးကုရုနေဖြင့်အမိန့်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်ရှိမရှိကြည့်ဖို့, ယေရုရှလင်မြို့၌ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ရမည်အကြောင်း. ထိုအခါရှင်ဘုရင်၏အလိုတော်ဤအမှုနှင့် ပတ်သက်. ကျွန်တော်တို့ကိုစလှေတျတျောနိုင်ပါသည်။ "
6:1 ထိုအခါရှင်ဘုရင်ကဒါရိမင်းကြီးညွှန်ကြား, သူတို့ဗာဗုလုန်မြို့၌အပ်နှံခဲ့စာအုပ်များ၏စာကြည့်တိုက်အတွက်ကိုရှာဖွေ.
6:2 ထိုအ Ecbatana မှာရှိရှာတွေ့ခဲ့သည်, မီဒီယာ၏ပြည်နယ်အတွက်ခိုင်ခံ့သောအရပျအရာဖြစ်ပါသည်, တဦးတည်းအသံအတိုးအကျယ်, နှင့်ဤစံချိန်တစ်ခုကို၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ခဲ့သည်:
6:3 "မင်းကြီးသည်ကုရု၏ပထမနှစျတှငျ, ကုရုမင်းကြီးသည်ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်အကြောင်းစီရင်ဆုံးဖြတ်, ယေရုရှလင်မြို့၌အရာဖြစ်ပါသည်, သူတို့သားကောင်များ immolate ရာအရပ်တွင်တည်ဆောက်ထားခံရကြလိမ့်မည်, ခြောက်ဆယ်တောင်ရှိသောအမြင့်ခြောက်ဆယ်အတောင်တစ် width ကိုထောကျပံ့ပေးသကဲ့သို့သူတို့အမြစ်ကိုသတ်မှတ်သင့်ကြောင်း,
6:4 ကြမ်းတမ်းသောကျောက်တို့သုံးတန်းနှင့်အတူ, ဒါအသစ်သောသစ်သားတန်းရှိသည်ဖို့အဖြစ်, နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ရှငျဘုရငျ၏အိမျမှပေးအပ်ခြင်းခံရလတံ့သော.
6:5 ဒါပေမယ့်လည်း, ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်၏ရွှေ, ငွေဖလားတို့ကိုပါစေ, ဗုခဒ်နေဇာသည်ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်လက်မှလုယူသော, နှင့်ပေးသောသူသည်ဗာဗုလုန်သို့သိမ်းသွားခြင်း, ပြန်လည်နှင့်ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်သို့ပြန်လည်သယ်ဆောင်ခံရ, သူတို့ရဲ့အရပ်မှ, ထိုသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်၌နေရာချခဲ့သကဲ့သို့.
6:6 သို့ဖြစ်., Tattenai ပါစေ, မြစ်ထက်ကျော်လွန်သောဒေသ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူး, Shetharbozenai, နှင့်သင့်တိုင်ပင်မှူးမတ်, မြစ်ထက်ကျော်လွန်နေသောအစိုးရသောမင်းတို့, အဝေးမှာသူတို့ထံမှဆုတ်ခွာ,
6:7 ယုဒလူတို့၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ယင်းတို့၏အကြီးအကဲမျ​​ားထံဖြန့်ချိခြင်းကိုခံရသညျဘုရားသခငျ၏ဤဗိမာန်တော်ကိုကုန်အံ့, သူတို့နေရာ၌၌ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ရမည်အကြောင်း, ဒါကြောင့်.
6:8 ထို့အပြင်, ဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းယုဒအမျိုး၏ယဇ်ပုရောဟိတ်အားဖြင့်ပြုသောအမှုခံရဖို့ဘာကိုမှအဖြစ်ငါ့အားဖြင့်ညွှန်ကြားထားခဲ့ပြီး, ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ရမည်အကြောင်း, ဒါကြောင့်, အထူးသဖြင့်, ရှငျဘုရငျ၏ဘဏ္ဍာတိုက်ထဲက, ကြောင်း, မြစ်တဘက်ဒေသတွင်းမှခေါ်ဆောင်သွားသောအခွန်အနေဖြင့်, ကုန်ကျစရိတ်ခံမှုရှိတဲ့သူတွေကိုလူတို့အားအပ်ပေးတော်မူခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်, အလုပျနှောင့်နှေးမနေစေခြင်းငှါဤမျှ.
6:9 သို့သော်ထိုသို့လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်ပါသည်လျှင်, နွားသငယ်ကိုလည်းကုန်အံ့, နှင့်သိုးသငယ်, ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်၏မီးရှို့ဘို့နှင့်ဆိတ်သငယ်, စပါးနှင့်, ဆားငန်, ဝိုင်, ရေနံနှင့်, ယေရုရှလင်မြို့၌နေသောယဇ်ပုရောဟိတ်၏ရိုးထုံးတမ်းစဉ်နှင့်အညီ, နေ့တိုင်းအဘို့ထိုသူတို့အားပေးတော်မူခြင်းကိုခံရ, တစုံတခုကိုမျှမတိုင်ကြားချက်စရာဖြစ်အံ့သောငှါဤမျှ.
6:10 ထိုအခါသူတို့ကိုကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်၏ပူဇော်သက္ကာကိုဆက်ကပ်ကြကုန်အံ့, သူတို့ကိုရှင်ဘုရင်၏အသက်အဘို့နှင့်သူ၏သားတို့၏ဘဝအဘို့ဆုတောင်းစေ.
6:11 ထို့ကြောင့်, အမိနျ့တျောအားဖွငျ့အကြှနျုပျကိုဘွားသတ်မှတ်ထားပါတယ်, သောကြောင့်, ဒီအမိန့်ကိုပြောင်းလဲမည်သူကိုမဆိုသောသူတယောက်မျှမရှိစေလျှင်, တစ်ရောင်ခြည်မိမိအိမျထဲကနေယူရမည်, ထိုသို့ဖွင့်လှစ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်, သူကမှရိုက်ခံရကြလိမ့်မည်. ထိုအခါမိမိအိမျကိုသိမ်းယူခံရကြလိမ့်မည်.
6:12 သို့ဖြစ်., အဲဒီမှာအသက်ရှင်ရန်သူ၏နာမဖြစ်ရတဲ့သူသညျဘုရားသခငျဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ဖို့ကိုသူတို့လက်တိုးချဲ့မယ်လို့သို့မဟုတ်ညျဘုရားသခငျ၏အိမျကိုဖကျြဆီးသူဆိုတိုင်းနိုင်ငံတို့သို့မဟုတ်လူစုကိုပင်ဖျက်ဆီးစေခြင်းငှါ, ယေရုရှလင်မြို့၌အရာဖြစ်ပါသည်. ငါ, ဒါရိမင်းကြီး, အမိန့်တည်စေပြီ, ငါခံမှုရှိတဲ့ပွညျ့စုံမညျမှအလိုရှိ၏။ "
6:13 ထို့ကြောင့်, Tattenai, မြစ်တဘက်ယင်းဒေသ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူး, နှင့် Shetharbozenai, နှင့်သူ၏တိုင်ပင်မှူးမတ်, ဒါရိမင်းကြီးညွှန်ကြားထားခဲ့ရာရှင်ဘုရင်နှင့်အတူအညီ, စေ့စေ့အတူတူကွပ်မျက်ခံရ.
6:14 ထိုအခါယုဒလူတို့၏အကွီးအကဲမြားတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပှားခဲ့ကြ, ဟဂ်ဂဲ၏အနာဂတ္တိနဲ့အညီ, ပရောဖကျ, ဇာခရိ, ဣဒေါသား. ထိုသူတို့သညျတညျဆောကျအမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်၏အမိန့်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ထား, နှင့်ကုရုနှင့်ဒါရိမင်းကြီးအမိန့်အားဖြင့်, အဖြစ်အာတဇေရဇ်, ရှရှင်ဘုရင်.
6:15 ထိုသူတို့က, အာဒါလတစ်လ၏သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ဘုရားသခငျ၏ဤအိမျတျောပြီးစီးခဲ့, အရာသည်ရှင်ဘုရင်ဒါရိမင်းကြီးနန်းစံခြောက်နှစ်ကြီး.
6:16 ဣသရေလအမျိုး၏ထိုအခါအမြိုးသားတို့, ယဇ်ပုရောဟိတ်, လေဝိသားတို့သည်, နှင့် transmigration ၏သားအကြွင်းဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်အပ်နှံကျင်းပ.
6:17 ထိုသူတို့ကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်, ဘုရားသခင့်အိမ်တော်သို့အပ်နှံဘို့, တရာနွားသငယ်, နှစျရာသိုးထီး, လေးတရာသိုးသငယ်, နှင့်, ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အဘို့အပြစ်ဖြေရာပူဇော်သက္ကာအဖြစ်, ဆိတ်သငယ်အထဲမှတဆယ်နှစ်လုံးကိုသူဆိတ်, ဣသရေလအမျိုးအနွယ်၏အရေအတွက်အတိုင်း.
6:18 ထိုသူတို့ကသူတို့ရဲ့ကွဲပြားခြင်းသို့ယဇ်ပုရောဟိတ်အဖြစ်ခန့်အပ်, မိမိတို့အလှည့်သို့နှင့်လေဝိသား, ယေရုရှလင်မြို့၌ဘုရားသခင်၏အမှုတော်တို့ကိုကျော်, မောရှေ၏စာအုပ်ထဲတွင်ရေးသားခဲ့သကဲ့သို့.
6:19 ထိုအခါ transmigration ဣသရေလ၏သားတို့သည်ပသခါပွဲကိုထားရှိမည်, ပဌမလတဆယ်လေးရက်မြောက်သောနေ့၌အ.
6:20 ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့်လေဝိလူများအတွက်တစ်ဦးအဖြစ်ကိုစင်ကြယ်စေခဲ့. လူအပေါင်းတို့သည် transmigration သားအပေါင်းတို့အဘို့ပသခါပွဲကို immolate နိုင်ရန်အတွက်စင်ကြယ်စေခဲ့ကြ, နှင့်သူတို့ညီအစ်ကို, ယဇ်ပုရောဟိတ်, မိမိတို့အဘို့.
6:21 ဣသရေလအမျိုး၏ထိုအမြိုးသားတို့သ, အဆိုပါ transmigration ရာမှပြန်လာသောခဲ့သော, သူတို့ကိုမြေကြီးတပြင်တပါးအမျိုးသားတို့၏အညစ်အကြေးမှမိမိတို့ကွဲကွာခဲ့သောနှင့်သူအပေါငျးတို့, ဒါကြောင့်သူတို့ထာဝရဘုရားကိုရှာအံ့သောငှါ, ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်, စားခဲ့
6:22 ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးတဆေးမပါသောမုန့်ကို၎င်းပွဲခံစောင့်ရှောက်. သခင်ဘုရားသည်သူတို့ကိုအမှီ ပြု. ရွှင်လန်းလုပ်သောများအတွက်, သူကသူတို့ကိုရန်အာမခံချက်ရှင်ဘုရင်၏စိတျနှလုံးအပြောင်းလဲခဲ့သည်, ထာဝရဘုရား၏လက်တော်၏အိမျတျောအလုပျထဲမှာမိမိတို့လက်ကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့ဒါ, ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်.
7:1 အခုတော့ထိုအမှုအရာများသည်ပြီးနောက်, အာတဇေရဇ်နန်းစံစဉ်ကာလအတွင်း, ရှရှင်ဘုရင်၏, ဧဇရ, စရာယ၏သား, အာဇရိ၏သား, ဟိလခိ၏သား,
7:2 ရှလ္လုံ၏သား, ဇာဒုတ်၏သား, အဟိတုပ်၏သား,
7:3 အာမရိ၏သား, အာဇရိ၏သား, Meraioth ၏သား,
7:4 ဇေ၏သား, ဩဇိ၏သား, ကျသော၏သား,
7:5 Abishua ၏သား, ဖိနဟတ်၏သား, ဧလာဇာ၏သား, အာရုန်၏သား, ရှေ့ဦးစွာ မှစ. ယဇ်ပုရောဟိတ်,
7:6 ဒီတူညီတဲ့ဧဇရ, ဗာဗုလုန်မြို့မှတက်ပြီ; သူမောရှေ၏ပညတ္တိကျမ်း၌အကျွမ်းကျင်စာရေးခဲ့, သောထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်, ဣသရေလအမျိုး၌အပ်ပေး. ထိုအခါရှင်ဘုရင်ထံတော်ကသူ့တိုင်းအသနားခံစာခွင့်ပြု. သခင်ဘုရား၏လက်တော်သည်, မိမိဘုရားသခငျ, သူ့ကိုကျော်ခဲ့.
7:7 ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ထံမှနှငျ့အခြို့, ယဇ်ပုရောဟိတ်၏သားထံမှ, လေဝိသားတို့သည်၏သားထံမှ, နှင့်သီချင်းဆိုယောက်ျားကနေ, နှင့်တံခါးစောင့်အနေဖြင့်, နှင့်ဗိမာနျတျော၌ကျွန်ခံရာမှယေရုရှလင်မြို့သို့တက်ပြီ, ရှငျဘုရငျသအာတဇေရဇ်၏သတ္တမနှစ်တွင်.
7:8 ထိုသူတို့ကပဉ်စမလယေရုရှလင်မြို့၌ရောက်ရှိ, ရှငျဘုရငျ၏တူညီသောသတ္တမနှစ်တွင်.
7:9 ပဌမလ၏ပထမနေ့၌များအတွက်, သူကဗာဗုလုန်မြို့မှတက်မှစတင်ခဲ့သည်, နှင့်ပဉ္စမလ၏ပထမနေ့၌, သူကယေရုရှလင်မြို့၌ရောက်ရှိ. မိမိဘုရားသခင်၏ကောင်းသောလက်တော်သည်သူ့ကိုကျော်ခဲ့.
7:10 ဧဇရသူ၏စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ဘို့, ထာဝရဘုရား၏လက်တော်၏တရားကိုရှာအံ့သောငှါဒါ, သူသည်ဣသရေလအမျိုး၌ပညတ်တရားစီရင်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သင်ပေးလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်.
7:11 အခုတော့ဒီအမိန့်ပြန်တမ်း၏အက္ခရာ၏တစ်ဦးမိတ္တူဖြစ်ပါသည်, ရှငျဘုရငျသအာတဇေရဇ်ဧဇရမှပေးသော, ယဇ်ပုရောဟိတ်, တစ်ဦးစာရေးသခင်ဘုရား၏စကားနှင့်ဥပဒသေမြားအတွက်အမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုး၌မိမိအခမ်းအနားများအတွက်ကောင်းစွာဆုံးမသွန်သင်:
7:12 "အာတဇေရဇ်, ဘုရင်တို့၏ဘုရင်, ဧဇရမှ, ယဇ်ပုရောဟိတ်, ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်၏၏ပညတ်တရား၏အလွန်သင်ယူစာရေး: နှုတ်ဆက်ခြင်း.
7:13 ဒါဟာငါ့အားဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ထားပြီး, အကြင်သူသည်ဆန္ဒကိုကြောင်း, ဣသရေလအမျိုး၏လူများနှင့်ငါ့နိုငျငံအတှငျးရှိသူတို့၏ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့်လေဝိအကြား, ယေရုရှလင်မြို့သို့မသွား, သင်နှင့်အတူသွားရစေခြင်းငှါ.
7:14 သင်ရှင်ဘုရင်၏မျက်နှာနှင့်သူ့ခုနစ်ခုတိုင်ပင်မှူးမတ်ကနေလှေတျတျောမူပွီများအတွက်, သင်သည်သင်၏ဘုရားသခင်၏ပညတ်တရားအားဖြင့်ယုဒပြည်နှင့်ယေရုရှလင်သို့သွားရောက်စေခြင်းငှါဒါ, သင့်လက်၌အရာဖြစ်ပါသည်,
7:15 သင်ရွှေငွေသယ်ဆောင်စေခြင်းငှါဒါ, သောရှငျဘုရငျနှငျ့မိမိအတိုင်ပင်မှူးမတ်လွတ်လပ်စွာဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်အားပူဇျောပါပွီ, အဘယ်သူ၏စည်းဝေးရာတဲတော်ယေရုရှလင်မြို့၌ဖြစ်ပါသည်.
7:16 ထိုလူအပေါင်းတို့ရွှေငွေ, သင်သည်ဗာဗုလုန်တစ်ခုလုံးကိုပြည်နယ်ထဲတွင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်သလောက်, နှင့်သောလူဦးကမ်းလှမ်းမှုရန်ဆန္ဒရှိပါလိမ့်မယ်, ယဇ်ပုရောဟိတ်အချို့သူတို့၏ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်မှလွတ်လပ်စွာပူဇော်ပါလိမ့်မယ်အရာ, ယေရုရှလင်မြို့၌အရာဖြစ်ပါသည်,
7:17 လွတ်လွတ်လပ်လပ်လက်ခံ. နှင့်ဤငွေနှင့်, နွားသငယ်ဂရုတစိုက်ဝယ်ယူ, သိုးထီး, သိုးသငယ်, နှင့်၎င်းတို့၏ယဇ်နှင့်ရေစက်သွန်း, သင်တို့၏ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ကိုယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာကဤပူဇော်, ယေရုရှလင်မြို့၌အရာဖြစ်ပါသည်.
7:18 ဒါပေမယ့်လည်း, ထိုသို့ငွေ၏ကျန်ရှိသောရွှေနှင့်လုပ်သင်နှင့်သင်၏အစ်ကိုတို့ကိုနှစ်သက်ကြလိမ့်မည်သမျှ, သင်တို့၏ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီအဲဒီလို.
7:19 အလားတူပဲ, သင်တို့၏ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်မှုဆောငျလုပျငနျးအတှကျသငျသညျအားပေးပြီးမှပွီတန်ဆာ, ယေရုရှလင်မြို့၌ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ဤမကယ်မလွှတ်.
7:20 ထိုအခါ, သင်၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်အဘို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ပိုပြီးသမျှ, သငျသညျသုံးဖြုန်းဖို့အတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်သလောက်, ကဘဏ္ဍာတိုက်ထဲကနေပေးကြလိမ့်မည်, နှင့်ရှင်ဘုရင်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးကနေ,
7:21 ငါ့ကိုအားဖြင့်. ငါ, ရှငျဘုရငျသအာတဇေရဇ်, အများပြည်သူဘဏ္ဍာတိုက်၌ရှိသမျှသောအစောင့်အထိန်းခန့်အပ်ခြင်းနှင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ, မြစ်ထက်ကျော်လွန်နေသောသူတို့ကို, ကြောင်းသမျှဧဇရ, ယဇ်ပုရောဟိတ်, ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်၏၏ပညတ်တရား၏တစ်ဦးစာရေး, သငျသညျတောင်းရကြလိမ့်မည်, သငျသညျနှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်ပေးရကြလိမ့်မည်,
7:22 ပင်, ငွေများထဲမှအခွက်တထောင်အထိ, ထဂျုံများထဲမှတရာ cors မှ, နှင့်တက်စပျစ်ရည်ကိုတဦးတရာဗတ်မှ, နှင့်တက်ဆီတရာဗတ်မှ, ကိုအတိုင်းအရှည်မရှိဘဲအမှန်တကယ်ငန်.
7:23 ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်၏၏ရိုးထုံးတမ်းစဉ်နှင့်ဆိုင်သမျှသော, ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်မှခံမှုရှိတဲ့ဖြန့်ဝေပါစေ, ဖြစ်ကောင်း စိုးရိမ်. သူသည်ရှင်ဘုရင်၏နိုင်ငံတော်သို့နှင့်သူ၏သားတို့သည်ဆန့်ကျင်ဒေါသထွက်နေတဲ့ဖြစ်လာပေမည်.
7:24 အလားတူပဲ, ငါတို့သည်သင်တို့မှလူသိများစေမယ်လို့, လူအပေါင်းတို့သည်ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့် ပတ်သက်., လေဝိသားတို့သည်, နှင့်အဆိုတော်များ, နှင့်တံခါးစောင့်, နှင့်ဗိမာနျတျော၌ကျွန်ခံ, ဒီဘုရားသခင်၏အိမ်တော်နှင့်ဝန်ကြီးများ, သငျသညျအခှနျစည်းကြပ်ရန်မအခွင့်အာဏာရှိသည်, သို့မဟုတ်အခွန်ဆက်, သို့မဟုတ်တာဝန်သူတို့အပေါ်သို့.
7:25 သို့သော်သင်တို့အဘို့အအဖြစ်, ဧဇရ, သင်တို့၏ဘုရားသခင်၏ပညာနှငျ့အညီ, သင့်လက်၌အရာဖြစ်ပါသည်, တရားသူကြီးများနှင့်ကဲခန့်အပ်, သူတို့တစ်ခုလုံးကိုလူတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်ခြင်းအလိုငှါဒါ, မြစ်ကျော်လွန်ရာဖြစ်ပါသည်, သူတို့သင်တို့၏ဘုရားသခင်၏ပညတ်တရားကိုသိစေခြင်းငှါ, အထူးသဖြင့်ဒါ, ဒါပေမယ့်လည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်မသိဘဲသင်ပေးသကဲ့သို့.
7:26 နှင့်တစုံတယောက်သောသူသည်ကိုစေ့စေ့သငျ၏ဘုရားသခငျ၏တရားကိုစောင့်ရှောက်မည်မဟုတ်သူကို, နှင့်ရှင်ဘုရင်၏တရား, တရားသဖြင့်စီရင်တော်မူအပေါ်သို့ရောက်လိမ့်မည်, တစ်ခုခုကိုအသေသတ်ခြင်းကို, သို့မဟုတ်ပြည်ပရောက်မှ, သို့မဟုတ်သူ၏ဥစ်စာ၏သိမ်းယူခြင်းမှ, သို့မဟုတ်ဆက်ဆက်ထောင်။ "
7:27 မင်္ဂလာရှိတော်မူမည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင်, သူသည်ရှင်ဘုရင်၏စိတ်နှလုံးသို့ဤဝတ်ထားပြီး, သူသည်ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းငှါဒါ, ယေရုရှလင်မြို့၌အရာဖြစ်ပါသည်.
7:28 သူရှငျဘုရငျ၏ရှေ့တျော၌အကြှနျုပျကိုဆီသို့မိမိသနားခြင်းကရုဏာတော်လှည့်ပြီ, နှင့်သူ၏တိုင်ပင်မှူးမတ်, ရှင်ဘုရင်နှင့်လူအပေါင်းတို့သည်အစွမ်းထက်ခေါင်းဆောင်များ. ဆိုတော့, သခင်ဘုရား၏လက်တော်ဖြင့်ခိုင်ခံ့စေ၏ခံတော်မူပြီးမှ, ဘုရားရေ, အရာအကြှနျုပျအပျေါခဲ့, ငါသည်ဣသရေလအမျိုး၏ခေါင်းဆောင်များအခြို့မှာစုဝေး, ငါနှင့်အတူအဖွင့်သွားကြဖို့ဖြစ်နှင့်သောသူတို့.
8:1 ဒီတော့အဲဒီမိသားစုများ၏ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသည်, သူတို့ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်နှင့်အတူ, ဗာဗုလုန်မြို့ မှစ. ငါနှင့်အတူတက်ကြွသောသူတို့၏အမျိုးအ, ရှငျဘုရငျသအာတဇေရဇ်နန်းစံစဉ်ကာလအတွင်း.
8:2 ဖိနဟတ်၏သားထံမှ, ဂေရရှုံ. ဣသမာ၏သားထံမှ, ဒံယလေက. ဒါဝိဒ်၏သားမြေးကနေ, ဟတ္တုတ်.
8:3 ရှေခနိ၏သားထံမှ, ပါရုတျ၏သား, ဇာခရိ, တရာငါးဆယ်တို့သညျသူ့ကိုနှင့်အတူရေတွက်.
8:4 ပါဟတ်မောဘအမြိုးသားတို့အနေဖြင့်, Eliehoenai, ဇေ၏သား, နှစ်ရာတို့သညျသူ့ကိုနှင့်အတူရှိ.
8:5 ရှေခနိ၏သားထံမှ, ယဟာဇေလ၏သား, သုံးရာတို့သညျကိုယျတျောနှငျ့ခဲ့ကြသည်.
8:6 အာဒိ၏သားထံမှ, ဧဗ, ယောနသန်၏သား, နှင့်လူငါးကျိပ်တို့ကိုသူနှင့်အတူရှိကြ၏.
8:7 ဧလံ၏သားထံမှ, Jeshaiah, အာသလိ၏သား, ခုနစ်ဆယ်နှင့်ယောက်ျားကသူ့ကိုနှင့်အတူရှိ.
8:8 ရှေဖတိ၏သားထံမှ, ဇေဗဒိ, မိုက်ကယ်၏သား, နှင့်ရှစ်ဆယ်လူတို့သညျကိုယျတျောနှငျ့ခဲ့ကြသည်.
8:9 ယွာဘသည်၏သားထံမှ, ဩဗဒိ, ယေဟေလ၏သား, နှစ်ရာတဆယ်ရှစ်တို့သညျသူ့ကိုနှင့်အတူရှိ.
8:10 ရှေလောမိတ်၏သားထံမှ, Josiphiah ၏သား, တရာခြောက်ဆယ်လူတို့သညျကိုယျတျောနှငျ့ခဲ့ကြသည်.
8:11 ဗေဗဲသားကားကနေ, ဇာခရိ, ဗေဗဲ၏သား, နှစ်ဆယ်ရှစ်ယောက်တို့သညျသူ့ကိုနှင့်အတူရှိ.
8:12 အာဇဂဒ်၏သားထံမှ, ယောဟနန်, Hakkatan ၏သား, တရာတဆယ်လူတို့သညျကိုယျတျောနှငျ့ခဲ့ကြသည်.
8:13 အဒေါနိကံ၏သားထံမှ, နောက်ဆုံးအဘယ်သူသည်ခဲ့ကြသည်, ဤသူတို့၏အမည်များဖြစ်ကြသည်: ဧလိဖလက်, နှင့် Jeuel, ရှေမာယနှင့်, ခြောက်ဆယ်လူတို့သညျသူတို့နှင့်အတူရှိကြ၏.
8:14 ဗိဂဝဲ၏သားထံမှ, Uthai နှင့်ဇက်ကုရ, ခုနစ်ဆယ်နှင့်ယောက်ျားသူတို့နှင့်အတူရှိကြ၏.
8:15 ယခုငါနှိမ့်ချ Ahava မှပြေးသောမြစ်မှာစုဝေးစေ, ကျနော်တို့သုံးရက်အဲဒီမှာတည်းခို. ထိုအခါငါလေဝိသားအဘို့လူစုနှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြားရှာသောအခါ, ငါအဲဒီမှာအဘယ်သူမျှမတွေ့ရှိရ.
8:16 ဒါကြောင့်လဲကျနော်ဧလျေဇာကိုစေလွှတ်, နှင့် Ariel, ရှေမာယနှင့်, နှင့်ဧလနာသန်, နှင့်ယာရိပ်, နှင့်အခြားဧလနာသန်, နာသနျ, ဇာခရိ, နှင့်မေရှုလံ, ခေါင်းဆောင်များအဘယ်သူသည်ခဲ့ကြသည်, ခေါ်နဲ့ဧလနာသန်နှင့်, ပညာကိုအဘယ်သူသည်.
8:17 ထိုအခါငါဣဒေါကသူတို့ကိုစလှေတျတျော, ပထမဦးဆုံးအ Casiphia ၏အရပျအတွင်းသောသူသည်. ထိုအခါငါသူတို့နှုတ်၌သူတို့ဣဒေါနှင့်သူ့ညီအစျကိုပွောဆိုသငျ့သောစကားဟူထားရှိ, ဗိမာနျတျော၌ကျွန်ခံ, Casiphia ၏အရပျ၌, သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုမှငါတို့ဘုရားသခငျ၏အိမ်တော်အဘို့ဝန်ကြီးများဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်.
8:18 ထိုအကြောင်းကြောင့်ငါတို့ဘုရားသခငျ၏ကောင်းသောလက်အကြှနျုပျတို့ကိုအုခဲ့, သူတို့ကားမဟာလိ၏သားမှကျွန်တော်တို့တစ်ဦးအလွန်သင်ယူလူကိုဦးဆောင်, လေဝိအမျိုးသား, ဣသရေလအမျိုး၏သား, Sherebiah နှင့်အတူ, နှင့်သူ၏သားတို့သည်, နှင့်သူ၏တဆယ်ရှစ်ကညီအစ်ကိုတွေ,
8:19 ဟာရှဘိ, သူနှင့်အတူ Jeshaiah, မေရာရိ၏သား, နှင့်သူ၏ညီအစ်ကိုများ, နှင့်သူ၏သားတို့သည်, နှစ်ဆယ်အရအေတှကျ.
8:20 ထိုအစဉ်အတိုင်းဗိမာန်တော်၌ကျွန်ခံရာမှ, အဘယ်သူကိုဒါဝိဒ်သည်, နှင့်ခေါင်းဆောင်များလေဝိသားတို့ဓမ်မအမှုအတှကျပေးခဲ့, နှစ်ရာနှစ်ဆယ်တို့သည်ဗိမာန်တော်၌ကျွန်ခံရှိကြ၏. ဤသူအပေါင်းတို့သည်၎င်းတို့၏အမည်များဖြင့်သင့်ကိုခေါ်ခဲ့သည်.
8:21 ထိုအခါငါအရပျ၌အစာရှောင်ရာကိုကြွေးကြော်, မြစ် Ahava အနားမှာ, ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ဘုရား၏မျက်မှောက်၌ကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျ၌ကိုယျကိုညှဉျးဆဲစေခြင်းငှါဒါ, ကျနော်တို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုနည်းမှန်လမ်းမှန်ကိုတောင်းဆိုအံ့သောငှါဒါ, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏၏သားတို့အဘို့, လူအပေါင်းတို့ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းဥစ္စာဘို့.
8:22 ငါအကူအညီနှင့်မြင်းစီးသူရဲအဘို့ရှင်ဘုရင်သည်အယူခံလွှာတင်ရေးရှက်ဘို့, သူလမ်းတစ်လျှောက်ရန်သူကနေကျွန်တော်တို့ကိုခုခံကာကွယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း. ကျနော်တို့ရှင်ဘုရင်အားပြောသည်များအတွက်: "ငါတို့ဘုရားသခငျ၏လက်ကောင်းမြတ်ခြင်းအတွက်သူ့ကိုရှာအံ့သောငှါသောသူအပေါင်းတို့ကျော်. နှင့်သူ၏အခွင့်အာဏာ, နှင့်သူ၏အစွမ်းသတ္တိ, ဒေါသအမျက်, သူ့ကိုစွန့်သောသူအပေါင်းတို့ကိုကျော်ပါပဲ။ "
8:23 ဒါကြှနျုပျတို့သညျဤအဘို့အကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျအစာရှောင်ခြင်းနှင့်တောင်းပန်; ကာရလဒ်အဖြစ်, ကျွန်တော်သည်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု.
8:24 ထိုနောက်မှငါသည်ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ခေါင်းဆောင်များထဲမှတဆယ်နှစ်လုံးကိုကွဲကွာ: Sherebiah, ဟာရှဘိ, သူတို့ရဲ့ညီအစ်ကိုသူတို့နှင့်အတူတဆယ်.
8:25 ထိုအခါငါကသူတို့ကိုရန်ငွေနှင့်ရွှေထွက်ချိန်, နှင့်တန်ဆာကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျ၏အိမျတျောအဘို့သန့်ရှင်း, ရှငျဘုရငျကကမ်းလှမ်းခဲ့သော, နှင့်သူ၏တိုင်ပင်မှူးမတ်နှင့်သူ၏ခေါင်းဆောင်များက, အမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သူတွေကိုတွေ့ခဲ့ဖူးသော.
8:26 ထိုအခါငါမိမိတို့လက်ကိုအားငွေခြောက်ရာငါးဆယ်ခွက်ထွက်ချိန်, ငွေတရာအိုးများတို့ကို, ရွှေနှင့်တစ်ခွက်တထောင်,
8:27 တထောဒင်္ဂါးပြား၏အလေးချိန်ရှိခဲ့ရာနှစ်ဆယ်ကိုရွှေဖလား, နှင့်အကောင်းဆုံးသောမထွန်းလင်းဘဲနေကြကြေးဝါစစ်ဖလားနှစ်လုံးတို့ကို, ရွှေကဲ့သို့အဖြစ်လှပသော.
8:28 ထိုအခါငါကလညျး: "သင်တို့သည်သခင်ဘုရား၏သန့်ရှင်းသူတို့ကိုများမှာ, နှင့်တန်ဆာအဘို့သန့်ရှင်းများမှာ, ငွေနှင့်ရွှေနှင့်, ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌လွတ်လပ်စွာကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ထားပြီးဖြစ်သော, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင်.
8:29 သူတို့ကို Watch နှင့်စောင့်ရှောက်, သငျသညျယဇျပုရောများ၏ခေါင်းဆောင်များနှင့်လေဝိသားတို့သည်ရှေ့တော်၌ထွက်ချိန်သည်အထိ, ယေရုရှလင်မြို့၌ဣသရေလအမျိုး၏မိသားစုများ၏သောမင်းတို့, ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်ကိုဘဏ္ဍာတိုက်ထဲသို့။ "
8:30 ထိုအခါယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့်လေဝိသားတို့သည်ထိုငွေအလေးချိန်ကိုလက်ခံရရှိ, နှင့်ကိုရွှေ, နှင့်တန်ဆာ, ဒါကြောင့်သူတို့ကဂျေရုဆလင်ဤသယ်ဆောင်စေခြင်းငှါ,, ငါတို့ဘုရားသခငျ၏အိမျသို့.
8:31 ထို့ကြောင့်, ကျနော်တို့မြစ် Ahava ထံမှထွက်မသတ်မှတ်, ပဌမလ၏ဒွါဒသမနေ့၌, ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားလာအံ့သောငှါဒါ. ထိုအကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျ၏လက်ကိုငါတို့အပေါ်မှာခဲ့သည်, သူသည်ရန်သူလက်မှနှင့်လမ်းတလျှောက်မှာကင်းထိုး၌အိပ်သောသူတို့၏အမျိုးအကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်.
8:32 ငါတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၌ရောက်ရှိ, ကျနော်တို့သုံးရက်အဲဒီမှာတည်းခို.
8:33 ထိုအခါ, စတုတ္ထနေ့၌, ငွေနှင့်ရွှေနှင့်တန်ဆာငါတို့ဘုရားသခငျ၏အိမျတျော၌ထွက်ချိန်ခဲ့ကြသည်, ကျမှတို့လက်ဖြင့်, ဥရိယ၏သား, ယဇ်ပုရောဟိတ်; သူနှင့်အတူဧလာဇာခဲ့သည်, ဖိနဟတ်၏သား, သူတို့နှင့်အတူလေဝိသားတို့သည်ခဲ့ကြသည်, ယောဇဗဒ်, ယောရှု၏သား, နှင့် Noadiah, ဗိနွိ၏သား.
8:34 ဤသည်အရာခပ်သိမ်း၏နံပါတ်နှင့်အလေးချိန်နှင့်အညီပြုလေ၏; သည်အလေးချိန်ထိုအချိန်ကချရေးသားခဲ့.
8:35 ထို့အပြင်, သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောမှလာသောသူတို့အား, အဆိုပါ transmigration ၏သား, ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်အားမီးရှို့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်: ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်လူအများ၏ကိုယ်စားတကျိပ်နှစ်ပါးသောနွားသငယ်, ကိုးဆယ့်ခြောက်ထီး, ခုနစ်ဆယ်ခုနစ်သိုးသငယ်, အပြစ်တရား၏အဘို့နှင့်တဆယ်နှစ်လုံးကိုသူကဆိတ်. ဤသူအပေါင်းတို့သည်ထာဝရဘုရားအားမီးရှို့ခဲ့ကြ.
8:36 ထိုအခါသူတို့ကရှငျဘုရငျ၏ရှေ့တျော၌တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူအစိုးရသောမင်းတို့မှရှင်ဘုရင်၏အမိန့်ပြန်တမ်းကိုပေး၏, နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှမြစ်ကျော်လွန်, သူတို့လူများကိုချီးမြှောက်ခြင်းသို့နှင့်ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်.
9:1 ထိုအခါ, ဤအမှုအရာတို့ကိုပြီးစီးပြီးနောက်, ခေါင်းဆောင်များငါ့ဆီသို့ရောက် လာ., ဟုဆို: ဣသရေလအမျိုး၏ "လူ, ယဇ်ပုရောဟိတ်, လေဝိသားတို့သည်, အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်၏လူမျိုးတို့မှနှင့်သူတို့၏စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအနေဖြင့်ကွဲကွာခဲ့ကြပြီမဟုတ်, ခါနနိလူများ၏အထူးသဖြင့်သူတို့အား, နှင့်ဟိတ္တိ, နှင့်ဖေရဇိ, နှင့်ယေဗုသိလူ, နှင့်အမ္မုန်အမျိုးသားတို့ကို, နှင့်မောဘလူ, နှင့်အဲဂုတ္တုလူတို့သည်, နှင့်အာမောရိလူ.
9:2 သူတို့ကိုယ်တိုင်နှင့်သူတို့သားအဘို့မိမိတို့သမီးများအနေဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားပြီ, သူတို့သည်အပြည်ပြည်လူမျိုးနှင့်အတူတစ်ဦးသည်သန့်ရှင်းသောအနွယ်ရောနှောခဲ့ကြ. ထိုအခါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကဲမငျး၏ပင်လက်တော်သည်ဤလွန်ကျူးခြင်း၌ပထမဦးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ "
9:3 ငါသည်ဤစကားလုံးကြားလျှင်, ငါသည်ငါ့ရင်ခွင်, ငါ့အင်ျကြီကိုဆုတ်, ငါသည်ငါ၏ဦးခေါင်းနှင့်မုတ်ဆိတ်၏ဆံပင်ဆွဲထုတ်, ငါစိတ်မသာညည်းတွား၌ထိုင်.
9:4 ထိုအခါဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူအပေါင်းတို့ငါ့ထံသို့စုဝေးစေ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအနေဖြင့်ရောက်ရှိလာခဲ့ဖူးသူမြား၏လွန်ကျူးခြင်း၏. ထိုအခါငါဝမ်းနည်းခြင်း၌ထိုင်, ညနေပိုင်းတွင်ယဇျပူဇျောသည်အထိ.
9:5 ညဦးနှင့်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကိုမှာ, ငါသည်ငါ၏အမှုကိုဆင်းရဲခြင်းထ, နှင့်, ငါ့အဝတျလုံနှင့်ငါ့အင်ျကြီကိုဆုတ်ပြီးမှ, ငါသည်ငါ့ဒူးကျဆင်း, ငါသည်ထိုသခင်ဘုရားမှငါ့လက်ကိုထွက်ရောက်ရှိခဲ့သည်, ဘုရားရေ.
9:6 ထိုအခါငါကပြောသည်: "ဘုရားရေ, ငါသည်သင်တို့ကိုငါ့ဖူးမြော်ဖို့ရှက်ကြောက်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိပါ၏. ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကြှနျုပျတို့ခေါငျးပျေါမှာများပြားစေပြီများအတွက်, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြစ်မှုများတိုးမြှင့်ပါပြီ, ပင်မိုဃ်းကောင်းကင်သို့တက်,
9:7 ငါတို့ဘိုးဘေးများ၏လက်ထက် မှစ.. ဒါပေမယ့်လည်း, ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်အသညျးအပြစ်မှားပါပြီ, ပင်ယနေ့တိုင်အောင်. နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်, ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှငျဘုရငျတို့နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ယဇ်ပုရောဟိတ်, အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်ရှင်ဘုရင်တို့သည်၏လက်သို့အပ်ခဲ့ကြ, ထားဘေးနှင့်ရန်, နှင့် captivity မှ, နှင့်လုယူရန်, နှင့်မျက်နှာ၏ရှုပ်ထွေးမှုများမှ, ဒါကြောင့်ဤနေ့အတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်သကဲ့သို့.
9:8 နှင့်ယခု, သေးငယ်တဲ့အတိုင်းအတာအထိရန်နှင့်တစ်ဦးအခိုက်အဘို့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသနားခံစာကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျထာဝရဘုရားကိုအတူပြီ, သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအကျန်အကြွင်းကိုစွန့်ခွာခြင်းအလိုငှါဤမျှ, ဒါသူ့အဘို့သန့်ရှင်းသောပွညျ၌လုံခြုံတဲ့နေရာအရပ်ငါတို့အားပေးတော်မူစေခြင်းငှါ,, ငါတို့ဘုရားသခင်၏ငါတို့မျက်စိအလင်းစေခြင်းငှါဤမျှ, ငါတို့ကျွန်အနည်းငယ်အသက်ကိုပေးတော်မူစေခြင်းငှါ.
9:9 ငါတို့သည်ကျွန်ဖြစ်ကြပါသည်, သို့သျောလညျးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်၌အကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုစှနျ့ပစျတျောမမူ, ဒါပေမဲ့သူရှရှင်ဘုရင်၏ရှေ့တော်၌အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုသနားနာမယူဘဲနေခဲ့ပြီ, သူကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ကိုပေးတော်မူစေခြင်းငှါဤမျှ, ငါတို့ဘုရားသခငျ၏အိမျတျောအဘို့ပေါ်ထွန်းစေခြင်းငှါ, နှင့်၎င်း၏သုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းပြုပြင်ရေးအတွက်, ကျွန်တော်တို့ကိုယုဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့၌တစ်ခြံပေးမည်.
9:10 နှင့်ယခု, ကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျ, ထိုအရာများကားအပြီးအဘယ်သို့ဆိုသင့်တယ်? ငါတို့သည်သင်တို့၏ပညတ်တို့ကိုစွန့်ပစ်မှုအတွက်,
9:11 အရာသင်သည်သင်၏ကျွန်တို့လက်ဖြင့်ညွှန်ကြား, ပရောဖကျအ, ဟုဆို: '' ထိုပြည်, သင်သည်ဝင်စားစေခြင်းငှါဒါကြောင့်သင်မဝင်ရကြဟုအရာ, မစင်ကြယ်သောမြေ, လူမျိုး၏ညစ်ညူးရန်နှင့်အခြားမြေများကြောင့်, ကပြည့်စေကြပြီသူမြား၏စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သော, ပါးစပ်ကနေပါးစပ်မှ, သူတို့ရဲ့တို့၏အညစ်အကြေးနှင့်အတူ။ ''
9:12 သို့ဖြစ်., သင်သည်သူတို့၏သားတို့အားသင်တို့၏သမီးကိုမပေးသင့်တယ်, မဟုတ်သလိုသင်သည်သင်၏၏သားတို့အဘို့သူတို့သမီးခံယူသင့်ပါတယ်. ထိုအသင်သည်သူတို့၏ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမရှာသင့်တယ်, မဟုတ်သလိုသူတို့ရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာ, ပင်ကိုအစဉ်အမြဲ. ဒါကြောင့်သင်ကခိုင်ခံ့စေ၏ရကြလိမ့်မည်, ဒါသငျသညျပွညျသားကောင်းသောအရာကိုစားရကြလိမ့်မည်, နှင့်သင့်အမွေခံအဖြစ်သင်၏သားတို့သည်ရှိ, ပင်လုံးကိုအကြိမ်.
9:13 ထိုအကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလွန်မတရားသောသူပြုသောအမှုတို့ကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးပြစ်မှုကိုမှဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှသောအပြီး, သငျသညျ, ကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျ, ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုစရိုက်မှငါတို့ကိုလွတ်မြောက်လာကြပါပြီ, သငျတို့သကျွန်တော်တို့ကိုကယျတငျတျောမူခွငျးပေးပြီ, ယနေ့နည်းတူ,
9:14 ကျနော်တို့ကိုလွှဲနှင့်သင့်သည်ပညတ်တရားကိုပယ်စေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်, ကျနော်တို့ကဤစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောလူတို့နှင့်အတူအိမ်ထောင်မှာစည်းလုံးညီညွတ်မည်မဟုတ်ဒါကြောင့်. သငျသညျကိုပင်အလွန်အဆုံးမှအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအမျက်ထွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်, သငျသညျအကျန်အကြွင်းကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုထားခဲ့ဖို့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်?
9:15 အိုထာဝရဘုရား, ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်, သင်ရုံများမှာ. ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းခံရဖို့ကျန်ရစ်ခဲ့ကြပြီ, ယနေ့နည်းတူ. အကယ်, ငါတို့သည်ငါတို့၏ပြစ်မှု၌သင်တို့၏မျက်မှောက်တော်၌ရှိကြ. ထိုသို့ဤအမှု၌သင်တို့ကိုဆီးတားဖို့မဖြစ်နိုင်ပါ။ "
10:1 ထို့ကြောင့်, ဧဇရဆုတောင်းအဖြစ်, နှင့်ညှာတာမှုကိုအပြင်းအထန်တောင်းဆိုနေတဲ့, နှင့်ဤလမ်းအတွက်ငိုကြွေးခြင်း, ဘုရားသခငျ၏ဗိမာန်တော်ရှေ့မှာနှိပ်စက်ခံခဲ့ရ, အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးများတစ်ဦးသည်အလွန်ကြီးသောပရိသတ်ဣသရေလအမျိုးမှအထံတော်၌စုဝေးခဲ့ပါတယ်. ထိုအခါလူများတို့သည်ကြီးစွာသောငိုကြွေးမြည်နှင့်အတူငိုကွှေးလကျြ.
10:2 ထိုအရှေခနိ, ယေဟေလ၏သား, ဧလံ၏သားထံမှ, တုန့်ပြန်နှင့်ဧဇရအားဆို၏: "ကျနော်တို့ကကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျပြစ်မှားပါပြီ, ပြည်သားနှင့်လူမျိုးတို့မှနိုင်ငံခြားမယားတို့ကိုယူကြပြီ. နှင့်ယခု, ဣသရေလအမျိုးကိုအတွင်းနောင်တတရားကဤကျော်ရှိလျှင်,
10:3 ကျွန်တော်တို့ကိုသခင်ဘုရားနှင့်အတူကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျတစ်စာချုပ်ဒဏ်ခတ်ပါစေ, ငါတို့ရှိသမျှသည်မယားတို့ကိုဘေးဖယ်ချပစ်စေခြင်းငှါဒါ, နှင့်သူတို့ထံမှမွေးဖွားခဲ့ကြတဲ့သူတွေ, သခင်ဘုရား၏အလိုတော်နှင့်အညီ, နှင့်သခင်၏ပညတ်ကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျကိုကွောကျရှံ့သောသူတို့၏အမျိုးအ. ဒါကြောင့်လုပျဆောငျစေ, ဥပဒေနှင့်အညီ.
10:4 ထလော့. သငျသညျသိမွငျဖို့အတှကျဒါဟာဖြစ်ပါသည်, နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူရှိရကြမည်. ခိုင်ခံ့စေပြီးပြုမူလိမ့်မည်။ "
10:5 ထို့ကြောင့်, ဧဇရသည်ထ, သူသည်ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ခေါင်းဆောင်များနှင့်လေဝိသားတို့သည်ဖြစ်ပေါ်စေ, အမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့, သူတို့ကဒီစကားလုံးနှင့်အညီအရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းကျိန်ဆိုရန်. ထိုသူတို့ကအဲဒါကိုကျိန်ဆို.
10:6 ဧဇရသည်ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ရှေ့တော်၌ထလျက်, သူယောဟနန်၏အခနျးမှသှားကွ၏, ဧလြာရှိပျ၏သား, သူကအထဲသို့ ဝင်.. သူကမုန့်မစားဘဲနေခဲ့ကြ, သူရေကိုမသောက်ခဲ့ဘူး. သူကသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအနေဖြင့်ရောက်ရှိလာခဲ့ဖူးသူမြား၏လွန်ကျူးစိတ်မသာညည်းတွားခဲ့သည်များအတွက်.
10:7 ထိုအခါစကားသံကိုယုဒပြည်နှင့်ယေရုရှလင်မြို့သို့စေလွှတ်တော်မူခဲ့သည်, အဆိုပါ transmigration သားအပေါင်းတို့မှ, သူတို့ယေရုရှလင်မြို့၌ စုဝေး. မယ်လို့ဒါ.
10:8 သုံးရက်အတွင်းရောက်လာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူအပေါငျးတို့သရှိသူများ, ခေါင်းဆောင်များ၏ဆုံးမစကားနှင့်အသက်ကြီးသူတို့နှင့်အညီ, အားလုံးသူ၏ဥစ္စာကိုယူသှားရှိသည်မယ်လို့, သူသည် transmigration ပရိသတ်ထဲကထုတ်ပစ်လိမ့်မယ်လို့.
10:9 ဆိုတော့, ယုဒအမျိုးနှင့်ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားအပေါင်းတို့သုံးရက်အတွင်းယေရုရှလင်မြို့၌ကျင်းပ. ဒါကနဝမလတွင်ခဲ့သည်, လနှစ်ဆယ်နေ့၌. လူအပေါငျးတို့သညျဘုရားသခငျ၏အိမျတျောလမျး၌ထိုင်လျက်, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အပွစျနှငျ့မိုဃ်းကိုရွာစေ၏တုန်လှုပ်.
10:10 ဧဇရသည်, ယဇ်ပုရောဟိတ်, သည်ထ, သူကထိုသူတို့အားပြောဆို: "သင်မှားကြပြီ, သငျတို့သနိုင်ငံခြားမယားတို့ကိုယူကြပြီ, သငျသညျဣသရေလအမျိုး၏ပြစ်မှုများမှဆက်ပြောသည်နိုင်အောင်.
10:11 နှင့်ယခု, ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဝန်ခံစေ, သင်တို့၏ဘိုးဘေးမြား၏ဘုရားသခငျသညျ, သူ့ကိုနှစ်သက်ဘာလုပ်, ပြည်သားနှင့်လူမျိုးတို့မှကိုယ်ကိုကိုယ်ခွဲခြား, နှင့်သင့်နိုင်ငံခြားမယားများအနေဖြင့်။ "
10:12 ထိုအခါတစျခုလုံးကိုအလုံးအရင်းတုံ့ပြန်, သူတို့ကြီးသောအသံနှင့်အတူကပြောပါတယ်: "ကျွန်တော်တို့ကိုရန်သင့်စကားလုံးနှင့်အညီခုနှစ်တွင်, ဒါကြောင့်လုပျဆောငျစေ.
10:13 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, လူအများဖြစ်ကြ၏ကတည်းက, ထိုသို့မိုဃ်းကိုရွာစေ၏အချိန်ဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့ပြင်မှာရပ်နေမတည်နိုင်ပါတယ်, နှင့်ဤတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ရက်များအတွက်လုပ်ငန်းတာဝန်မဟုတ်ပါဘူး, (ဆက်ဆက်အဘို့အကြှနျုပျတို့သညျဤအမှု၌အလှနျပွစျမှားပါပွီ,)
10:14 ခေါင်းဆောင်များတစ်ခုလုံးကိုလူအစုအဝေးအကြားခနျ့အပျခံရပါစေ. ထိုလူအပေါင်းတို့ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့ကြီးများအတွက်, နိုင်ငံခြားမယားတို့ကိုယူကြပြီတဲ့သူတွေကိုခန့်အပ်ထားသောအချိန်များတွင်ရောက်လာပါစေ, မြို့မှတမြို့သို့သူတို့နှင့်အတူအကွီးအကဲမြား, နှင့်တရားသူကြီးများ, ငါတို့ဘုရားသခငျ၏အမျက်တော်သည်ဤအပြစ်ကိုကျော်ငါတို့မှရှောင်ထားပြီးအထိပါပဲ။ "
10:15 ဒါယောနသန်, အာသဟေလ၏သား, နှင့် Jahzeiah, တိကဝ၏သား, ဒီကျော်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခဲ့သည်, လေဝိသားတို့သည်မေရှုလံနှင့် Shabbethai သူတို့ကိုကူညီ.
10:16 ထိုအခါ transmigration ၏သားပြု. ဧဇရသည်, ယဇ်ပုရောဟိတ်, သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးများ၏အိမ်များတွင်မိသားစုများ၏ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ဘူးသောသူနှင့်ယောက်ျား, လူအပေါင်းတို့သည်၎င်းတို့၏အမည်များကိုအညီ, ဝင်. ထိုင်ကြ၏, ဒသမလ၏ပထမနေ့၌, သူတို့ဒီကိစ္စကိုဆနျးစစျစခွေငျးငှါဒါ.
10:17 ထိုသူတို့ကနိုင်ငံခြားမယားတို့ကိုသိမ်းယူခဲ့သောလူအပေါငျးတို့နှင့်အတူအဆုံးသတ်ရန်လုပ်, ပဌမလ၏ပထမဦးဆုံးနေ့.
10:18 နှင့်နိုင်ငံခြားမယားတို့ကိုသိမ်းယူခဲ့သည်သောသူအချို့ယဇ်ပုရောဟိတ်၏သားတို့တှငျရှိတွေ့ရှိခဲ့သည်: ယောရှု၏သားထံမှ, ဇဒက်၏သား, နှင့်သူ၏ညီအစ်ကိုများ, မာသေယ, နှင့်ဧလျေဇာ, နှင့်ယာရိပ်, နှင့်ဂေဒလိ.
10:19 ထိုသူတို့ကသူတို့မယားများကိုဘေးဖယ်ချပစ်မယ်လို့မိမိတို့လက်နှင့်အတူကျိန်ဆို, သူတို့သည်သိုးတို့အထဲကသူတို့ရဲ့ပြစ်မှုသိုးထီးတကောင်အဘို့ပူဇော်မယ်လို့.
10:20 ထိုအဣမေ၏သားထံမှ, ဟာနန်နှင့်ဇေဗဒိ.
10:21 နှင့်ဟာရိမျ၏သားထံမှ, မာသေယ, ဧလိယ, ရှေမာယနှင့်, နှင့်ယေဟေလ, နှင့်သားတော်ဩဇိ.
10:22 ထိုအပါရှုရသားကားကနေ, Elioenai, မာသေယ, ဣရှမေလ, နာ, ယောဇဗဒ်, နှင့်ယေ.
10:23 ထိုအခါလေဝိသားအမြိုးသားတို့အနေဖြင့်, ယောဇဗဒ်, နှင့်ရှိမိ, နှင့် Kelaiah, တူညီသော Kelita ဖြစ်ပါသည်, Pethahiah, ယုဒအမျိုးကို, နှင့်ဧလျေဇာ.
10:24 ထိုအခါသီချင်းဆိုယောက်ျားကနေ, ဧလြာရှိပျ. ထိုအခါတံခါးစောင့်အနေဖြင့်, ရှလ္လုံ, နှင့် Telem, နှင့်ဥရိ.
10:25 ထိုအထဲကဣသရ, ပါရုတျအမြိုးသားတို့သထံမှ, Hriamiah, နှင့် Izziah, နှင့် Malchijah, နှင့် Mijamin, ဧလာဇာ, နှင့် Malchijah, ဗေနာယသည်.
10:26 ဧလံ၏သားထံမှ, မတ္တနိ, ဇာခရိ, နှင့်ယေဟေလ, နှင့် Abdi, နှင့်မု, ဧလိယ.
10:27 ထိုအဇတ္တု၏သားထံမှ, Elioenai, ဧလြာရှိပျ, မတ္တနိ, နှင့်မု, နှင့်မြိုး, နှင့် Aziza.
10:28 ဗေဗဲသားကားကနေ, ယောဟနန်, ဟာနနိသည်, Zabbai, Athlai.
10:29 နှင့်ဗာနိ၏သားထံမှ, မေရှုလံ, နှင့် Malluch, နှင့်အဒါယ, Jashub, နှင့် Sheal, ပြည်ရာမုတ်မြို့သို့.
10:30 ထိုအပါဟတ်မောဘအမြိုးသားတို့အနေဖြင့်, Adna, နှင့် Chelal, ဗေနာယသည်, မာသေယနှင့်, မတ္တနိ, ဗေဇလေလ, ဗိနွိ, မနာရှေအမျိုး.
10:31 နှင့်ဟာရိမျ၏သားထံမှ, ဧလျေဇာ, ယောရှု, မာလခိ, ရှေမာယ, ရှိမောင်,
10:32 ဗင်္ယာမိန်ခရိုင်, Malluch, Shemariah.
10:33 ထိုအဟာရှုံ၏သားထံမှ, Mattenai, Mattettah, မြိုး, ဧလိဖလက်, Jeremai, မနာရှေအမျိုး, ရှိမိသည်.
10:34 ဗာနိ၏သားထံမှ, Maadai, အာမရံ, နှင့် Uel,
10:35 ဗေနာယသည်, နှင့် Bedeiah, Cheluhi,
10:36 Vaniah, ကျမှ, နှင့်ဧလြာရှိပျ,
10:37 မတ္တနိ, Mattenai, နှင့် Jaasu,
10:38 နှင့် Money, နှင့်ဗိနွိ, ရှိမိသည်,
10:39 နှင့်ရှလေမိ, နာသနျ, နှင့်အဒါယ,
10:40 နှင့် Machnadebai, Shashai, Sharai,
10:41 Azarel, နှင့်ရှလေမိ, Shemariah,
10:42 ရှလ္လုံ, အာမရိ, ယောသပ်သည်.
10:43 နေဗော၏သားထံမှ, ယေယေလ, Mattithiah, မြိုး, Zebina, Jaddai, ယောလ, ဗေနာယသည်.
10:44 ဤသူအပေါင်းတို့သည်နိုင်ငံခြားမယားတို့ကိုသိမ်းယူခဲ့သည်, နှင့်သားဘွားမြင်သောသူအမြိုးသမီးမြားသညျသူတို့တှငျရှိကြ၏.